The Most Interesting Local Food To Edza In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > The Most Interesting Local Food To Edza In Europe
Kana totaura mukondinendi sezvo patsika zvakasiyana sezvo Europe, unogona Bet ari gastronomic tsika dziri sezvakanga siyana! Kana uri kuda kupikisa kugona yako pasi marudzi ose fadza (tiri kushandisa kuti chipauro euphemistically pano) yokufamba, Saka vane Kutarira kwedu mazita Zvokudya zveko dzinonakidza zvikuru kuedza muEurope uye kwokuuwana – uye zvichida kuchera mukati kana uri kunzwa kuziva kana kushinga.
Zvokudya zveko dzinonakidza zvikuru kuedza muEurope: Schwarzenauer
Pfungwa zvokudya zvakagadzirwa ropa inoita kuti pakarepo kufunga wokuScotland zvetsika zvokudya Haggis. A nyama Pudding ine hura dzemakwai (mwoyo, chiropa, uye nemapapu); minced pamwe hanyanisi, oatmeal, suet, zvinonhuwira, uye munyu, yakasanganiswa nesheya, uye yakabikwa apo yakagara yakavharirwa mudumbu remhuka. saka, pfungwa ropa muto hakusi okune Jerimani, asi Schwarzsauer, wayo nyama munuhwi, ndizvo.
Yaakaita yakawanda yenguruve ropa (kana dema Pudding), hanzi giblets, uye vhiniga, uyewo sinamoni, clove, peppercorns, uye nezvimwe inonhuhwira, dzakagadzirirwa ichi kubva kuchamhembe kweGermany ndiye nhumbi kueche kurota zvinotyisa.
Chinofadza ndechokuti imwe ndiro kwomwoyo pakati Schwarzsauer vachizochenjerera hwako mapuroteni zvinodiwa kuti vamwe zuva. Mashoko akaipa ndechokuti simba munuhwi (uye zvakanaka) hachisi chinhu kuti rinofadza munhu wose.
Iri ndiro uchawana kumisika zvokudya yomunharaunda kana zvetsika mumaresitorendi. Pano chimwe Datenroku Takawana kuti anoshumira nayo, Cafe Black Sauer saka kutarisa kuti kunze!
Zvokudya zveko dzinonakidza zvikuru kuedza muEurope: Filmjolk
Filmjolk aizivikanwawo fil, chinhu chetsika yakavira mukaka chigadzirwa kubva Sweden, uye chimwe romukaka chigadzirwa mukati Nordic nyika. Zvinonzi chinoitirwa hunotanga kuora mukaka siyana utachiona kubva kwemarudzi Lactococcus lactis uye Leuconostoc mesenteroides. Utachiona metabolize lactose, shuga muropa kuwanikwa mukaka, kupinda lactic asidhi izvo zvinoreva vanhu vane lactose chinonyanyisa anogona kushivirira nani pane vamwe dheri zvinogadzirwa. The asidhi rinopa filmjolk munhu yakashapa kunaka uye anoita mapuroteni mumukaka, kazhinji casein, kuti coagulate, nokudaro thickening yokupedzisira chigadzirwa. Utachiona zvinobudisawo shoma diacetyl, remubatanidzwa ane buttery munuhwi, aunopiwa filmjolk kwayo mamirire kuravira.
Hatisi zvachose kutengeswa iyi, asi iwe vakakumbira The anonakidza zvikuru yomunharaunda chikafu kuedza muEurope, kwete tastiest 😆
Zvokudya zveko dzinonakidza zvikuru kuedza muEurope: mufudzi Hove
Paunofunga munhu Air Kisimusi, scrumptious nekinamoni Cookies uye gravdlax kuti kutangwa mupfungwa. Chii iwe arege kufunga zviri smalahove. (chibooreso pachenyu) A akaitungidza uye akabika musoro yegwayana kuti anodada nzvimbo panguva Christmas kwemanheru patafura. Achiperekedzwa matapiri, mafuta uye mashed swede. Uyo ari rombo zvakakwana kuedza dhishi ichi, ane zvinofadza chowing pasi pamusoro fattiest matomu kutanga - meso, nzeve, uye rurimi kana zviri zvaisanganisira - asati scooping vasara musoro ane chipunu. Ndiyo - Merry Christmas!
Zvokudya zveko dzinonakidza zvikuru kuedza muEurope: herring
Ngatitaurei agumise ichi kure pamusoro tastier chitsamba, ko isu? Vanhu Vazhinji kuziva Danish ruomba makeke (smakager), uye liquorice (licorice), asi chii pamusoro vamwe zvokudya uye zvinhu zvakanaka?
Herring kwakakurumbira chaizvo ndiye Denmark! Zvinonzi atengeswa Smoked, curried, marinated, kana sezvo Sol Over Gudhjem. Iyo inodiwa kunyanya pachitsuwa cheDanish cheBornholm. 'Zuva pamusoro peGudhjem'. Rinoshandurwa kuti 'zuva pamusoro Gudhjem' – taundi Bornholm. Chinonzi buttered chimedu rye chingwa. Zvikamu pamwe herring, tsvuku nehanyanisi, uye zai zai. Dzimwe hove dzakadai salmon, plaice, uye kodhi vari adya dressings akadai parsley muto uye matapiri.
Ko muromo wako nokudiridza kuti The anonakidza zvikuru yomunharaunda chikafu kuedza muEurope? Bhuku rako inotevera uchinzvera achibatsirwa Save A Train !
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Finteresting-local-food-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Chitima Kufamba Denmark, Rovedza Kufamba Germany, Train Travel Holland, Chitima Kufamba Switzerland, Train Travel The Netherlands, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe